३८ लाख पर्ने यी गाडी अब पाइन्छ २५ लाख रुपैयाँमै
बजेटप्रति आमसर्वसाधारणको त्यति सकारात्मक धारणा छैन । बजेटले महँगी मात्रै थपिदिन्छ भन्ने आम बुझाइ छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले भने एउटै गाडीको मूल्य १३ लाख रुपैयाँ जति घटाइदिएको छ । पहिलाको भन्दा १३ लाख रुपैयाँ सस्तोमा गाडी नेपाल भित्रिसकेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा हाइब्रिड इन्जिन भएको गाडीमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्कमा ५०/५० प्रतिशत छुट दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । सो सुविधा प्रयोग गर्दै हाइब्रिड इन्जिन भएका गाडी नेपाल भित्रन थालेकाे भन्सार विभाग स्रोतले जानकारी दियो ।
पछिल्लो समयमा १० लाख रुपैयाँ मूल्यका हाइब्रिड गाडी नेपाल भित्रिएका हुन् । चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको केएमसी अटोमोबाइलले मारुती सुजुकीको बलेनो र आर्टिगा हाइब्रिड इन्जिनवाला गाडी नेपाल भित्रिएको छ । अन्य गाडी विक्रेताले पनि यस्तै हाइब्रिड गाडी नेपाल भित्र्याउने तयारी थालेका छन् ।
छुट नपाएको भए कति पर्थ्याे ?
यो गाडीको मूल्य १० लाख रुपैयाँ भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले छुट नदिएको भए सो गाडीको मूल्यको ८० प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यस्तो गर्दा सो गाडीको मूल्य १८ लाख रुपैयाँ हुन्थ्यो ।
सो १८ लाख रुपैयाँमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्थ्यो । यसो हुँदा गाडीको मूल्य १० लाख ८० हजार रुपैयाँ अन्तःशुल्क थपिएर २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ हुन्थ्यो ।
अन्तःशुल्क पछि कायम हुने मूल्य २८ लाख ८० हजार रुपैयाँमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्थ्यो । यसो हुँदा गाडीको मूल्य ३ लाख ७४ हजार ४ सय रुपैयाँ थपिएर ३२ लाख ५४ हजार ४ सय रुपैयाँ हुन्थ्यो ।
यति मात्रै होइन, गाडीमा अझै एक तह कर तिर्न बाँकी छ । भ्याट थप भएपछि कायम भएको ३२ लाख ५४ हजार ४ सय रुपैयाँमा सरकारले ८ प्रतिशत सडक दस्तुर लिन्छ । यो ८ प्रतिशतले हुन आउने २ लाख ६० हजार ३ सय ५२ रुपैयाँ थप गर्दा १० लाखमा आयात गरिएको सो गाडीको मूल्य ३५ लाख १४ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ हुन आउँथ्यो ।
यो मूल्यमा गाडी आयातकर्ताले ढुवानी भाडा, आफ्नो नाफालगायतका खर्च जोड्दा करिब ३८ लाख रुपैयाँ जति पर्न आउने व्यापारीहरु बताउँछन् ।
अब सस्तियो १३ लाख रुपैयाँ
तर, अब खरिदकर्ताले यस्ता गाडीलाई ३८ लाख रुपैयाँ भने तिर्नु पर्नेछैन । सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५०/५० प्रतिशत छुट दिएपछि मूल्य करिब १३ लाख रुपैयाँ सस्तो पर्ने देखिएको हो ।
१० लाख रुपैयाँको गाडीमा अब ४० प्रतिशत मात्रे भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ । यस्तो हुँदा गाडीको मूल्य ४ लाख रुपैयाँ बढेर १४ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
भन्सार महसुल थप भएपछिको १४ लाख रुपैयाँको ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तो हुँदा १४ लाखको ३० प्रतिशतले हुन आउने ४ लाख २० हजार रुपैयाँ थप गर्दा गाडीको मूल्य १८ लाख २० हजार रुपैयाँ पुग्छ ।
अन्तःशुल्क पछि कायम भएको १८ लाख २० हजार रुपैयाँको १३ प्रतिशतले हुन आउने भ्याट रकम २ लाख ३६ हजार ६ सय रुपैयाँ थप गरी २० लाख ५६ हजार ६ सय रुपैयाँ हुन्छ ।
अब एक तह कर बाँकी छ । त्यो कर भनेको ८ प्रतिशत सडक दस्तुर हो । सरकारले २० लाख ५६ हजार ६ सय रुपैयाँको ८ प्रतिशतका दरले १ लाख ६४ हजार ५ सय २८ रुपैयाँ सडक दस्तुर लिन्छ । यो रकम पनि जोड्दा १० लाख रुपैयाँमा किनेको सो गाडीको मूल्य २२ लाख २१ हजार १ सय २८ रुपैयाँ पर्छ ।
भन्सार र अन्तःशुल्क छुट नहुँदा सोही गाडीको कर लागत जोड्दा ३५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा भएको थियो । त्यसमा आयात खर्च, व्यापारीको नाफालगायतका खर्च ३ लाख रुपैयाँ थप गरी ३८ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पर्ने व्यापारीहरु बताउने गर्छन् ।
तर, भन्सार र अन्तःशुलकमा ५०/५० प्रतिशत छुट हुँदा कर लागतसहित गाडीको मूल्य २२ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा देखिएको छ । यसमा छुट हुनुभन्दा अगाडिकै बराबर करिब ३ लाख रुपैयाँ व्यापारीको नाफा, ढुवानी खर्चलगायतका खर्च थप गर्दा पनि सोही गाडी अब करिब २५ लाख रुपैयाँमा आउने देखिएको हो ।
२० लाखको गाडी नेपालमा किन पर्छ ८५ लाख ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २३, २०७६, ११:५६:००
गण्डकी प्रदेशले पहिलो पटक गर्‍यो बजार अनुगमन